Kianin’ilay Mpamakafaka Vaovao ho Manimba ny Finamànana Eny Anivon’ireo Toeram-ponenan’ny Mpianatry ny Anjerimanontolo Shinoa ny Toekaren’ny Fanaovana Irakiraka · Global Voices teny Malagasy
Kianin'ilay Mpamakafaka Vaovao ho Manimba ny Finamànana Eny Anivon'ireo Toeram-ponenan'ny Mpianatry ny Anjerimanontolo Shinoa ny Toekaren'ny Fanaovana Irakiraka
Voadika ny 01 Desambra 2016 17:02 GMT
Mpianatra milahatra mba haka ny entany nalefa paositra. Sary avy amin'ny tranonkalam-panjakana Xinhua.
Ny lazan'ny fomba fandoavana vola an-tambajotra no nampitsangana tolo-draharaha vaovao eo anivon'ireo mpianatra amin'ny oniversite ao Shina. Ny raharaha iray dia mety hiovaova eo anelanelan'ny fanaterana taratasy, entana nalefa paositra, sakafo, entana ary rano mafana mba hankany amin'ny fanaovana sonia an-dakilasy, fanaovana famelabelarana, fanoratana ireo antontan-taratasy amin'ny faran'ny fianarana, ary fanaovana ireo fanadinana ho an'ny mpiara-mianatra, ary nanangana adihevitra mafana amin'ny aterineto ny fisiana tolotra misahana irakiraka toa izany.
Goavana ary tsy misokatra ho an'ny olon-tsotra ny anakamaroan'ireo toeram-ponenan'ny mpianatra amin'ny oniversite maro ao Shina . Mamorona tsena miavaka miorina amin'ny fiainan'ilay toby ny toerana. Ohatra, amin'ny andro mangatsiakan'ny ririnina, betsaka ireo mpianatra no tsy te-hivoaka ivelan'ny trano hitady sakafo, handefa imailaka na hamonjy tsenakely fa aleony kokoa olon-kafa no hanao ny raharahany.
Tamin'ny lasa, dia toa ireo namana mpiara-mianatra aminy nagatahany hanao ny fiangaviany ary hovaliany izany ary aoriana. Na izany aza, satria niditra tamin'ny fiainan'izy ireo ny fandoavana vola an-tambajotra, betsaka amin'izao fotoana izao no misafidy ny hanakarama olon-kafa mba hanao ny raharahany amin'ny toerany.
Eo anivon'ireo mpampiasa aterineto miisa 700 tapitrisa ao Shina, eo amin'ny 60 isan-jato eo no mpampiasa mavitrika ny e-varotra ary ny fandoavana vola an-tambajotra tamin'ny 2015, miaraka amina habetsaka entana mahatratra hatramin'ny 11.8 arivo tapitrisa yuan, na eo amin'ny 1,7 arivo tapitrisa dolara Amerkàna eo.
Ireo mpianatry ny Oniversite no tena vondrona mpampiasa mavitrika indrindra. Tamin'ny 2015, 6% tamin'ireo entana aterina manerana ny firenena dia tany amin'ireo Toeram-ponenan'ny mpianatra amin'ny oniversite no toerana farany halehany.
Ireo fampiasa vaovao amin'ny finday, toy ny ”fanaterana any amin'ny toeram-ponenan'ny mpianatra” (校內達), dia natao manokana mba hanomezana sehatra ho an'ireo mpianatra mitady ireo mpiara-mianatra aminy hafa mba hamita irakiraka ho azy amina karama kely anelanelan'ny telo na dimy yuan isaky ny raharaha. Voalaza fa mpianatra sasany no efa nahavita nahazo 3.000 yuan tao anatin'ny iray volana tamin'ny fanaovana raharaha ho an'ireo hafa mpiara-mianatra aminy .
Ankoatra ny fampiasa amin'ny finday, dia mampiasa ireo efitra firesahana ihany koa ireo mpianatra, toy ny Tencent an'ny vondrona QQ, mba hanolorana tolotra mahabe resaka kokoa, toy ny fanaovana sonia mandritra ny fanatrehana fampianarana, maka ny toeran'ny mpianatra hafa amin'ny resaka atao an-dakilasy na famelabelarana, na hatramin'ny fanaovana ny fanadinana amin'ny toerany mihitsy aza.
Fanadihadiana iray natao no mampiseho fa ny antsasaky ny mpianatra eny amin'ny oniversite dia efa nanakarama mpianatra hafa mba haka ny toerany any an-dakilasy na nahita ny hafa nanao izany. Ny vidiny dia miovaova eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 50 yuan eo.
Ireo mpamakafaka vaovao amin'ny haino aman-jery ofisialy ao Shina dia nitsikera manoloana ity fihariankarena any an-toby fianarana ity tao amin'ny lahatsorany, miteny fa izany no vokatry ny mpianatra ampihantaina sy kamo loatra. Ny sasany, ao anatin'izany ilay mpanolotra vaovao, Zu Yuanyuan, ao amin'ny Youth.cn mifandray amin'ny Fikambanan'ny Tanora Kaominista Shinoa, dia efa naka fijery manembonembona ny fiainana any amin'ny toeram-ponenan'ny mpianatra.
Afaka mandeha an-tongotra miaraka mankeny amin'ny fanaterana entana nalefa paositra ireo mpiray efitra, na miangavy ny namany hanao asa fanampiana ho azy. Tokony ho fotoana ahafahana mhifampizarana hevitra tsara amin'ny mpiara-mianatra ny fandehanana miaraka mividy voankazo. Ny fakàna rano mafana ho an'ny iray hafa dia hetsika tsara mba hananganana finamaànana. Kanefa, noho ny firoboroboan'ny fihariankaren'ny irakiraka, simban'ny raharaham-barotra ahazoana tombontsoa ny finamànana — isaky ny mangataka ny mpiray efitra aminao mba haka entana nalefa paositra na hividy voankazo sasantsasany ho anao ianao, dia efa manomboka manontany tena fa mety handoa vola ho an'ilay iraka. Nisakana ireo mpianatra tamin'ny fampivelarana finamànana eny amin'ny toeram-ponenana ny fihariankaren'ny irakiraka ary nanova ny toeram-ponenana mafana ho toby mangatsiaka izay ny zava-drehetra dia tombanana amin'ny resaka vola daholo. Tokony ho asa fanampiana kely omen'ny namany ho an'ny iray hafa ny iraka. Tsy tokony hampanahy antsika ve hoe lasa andevozin'ny lanjan'ny vola tsikelikely ireo toeram-ponenan'ny mpianatra eto amintsika?
Amin'ny lafiny iray hafa, mpampiasa aterineto hafa no mahita ny tolotra irakiraka ho toy ny raharaham-barotra misy fahaizana mamorona. Ireto ny fanehoankevitra vitsivitsy avy amin'ny Weibo, iray amin'ireo randram-baovao ao amin'ny sehatra tambajotra sosialy malaza :
挺好啊 时间也是金钱啊 每个人价值观不一样 对待金钱的态度也不一样 爹妈有钱爹妈爱给孩子花 这有什么好批判的 多半是眼红吧 人家爹妈赚一辈子钱了就希望孩子活的轻松 凭什么非要道德绑架 非要看不得别人过得舒服和你一样苦哈哈才爽？
Tsara io. Vola ny fotoana. Samy manana ny fehezana soatoavina azony sy toetsaina samy hafa tànany manoloana ny resaka vola ny rehetra. Fa maninona no tokony hitsikera ireny ankizy manana ray aman-dreny manankarena izay mamela azy handany vola ireny isika? Ny ankamaroan'ireo tsikera dia noho ny fialonana. Tena miasa mafy tokoa ny ray aman-drenin'izy ireo mba hahamora ny fiainan'ny zanany, fa maninona ny mitsara azy? Te-hahita ny rehetra mitovy samy mahantra daholo ve ianao?
Tsy maintsy misaotra ireo mangataka ny tolotra hanao irakiraka sy haka ny toeran'ny mpianatra any an-dakilasy aho satria tsy tafavoaka velona aho raha tsy nisy ireo fidiram-bola fototra ho an'ny fivelomana.
Ny hakamoana no hery mitondra ny fandrosoana ara-tsiansa. Noforonina ny milina fanasana lamba satria kamo loatra ny olona hanasa ny akanjony. Natao ny bisikileta satria kamo ny handeha tongotra ny olona.